Home STARS EUROPEAN Mario Gotze tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Fahagagana". Ny tantaran-tantaran'i Mario Gotze tantaram-pahaterahana bebe kokoa ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy misy vitsivitsy dia mihevitra ny 'Our Bio Gotze's Bio' izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Voalohandohan'ny fiainana
Mario Götze dia teraka tamin'ny andro 3rd tamin'ny 1992 June tany Memmingen, Alemana. Izy dia teraka tamin'ny reniny Astrid Götze (vehivavy mpikarakara tokantrano) ary rainy Jürgen Götze (profesora ao amin'ny Oniversite University of Technology).
Goltze dia nobeazina tao amin'ny tranon'ny Kristianina kristianina iray. Izy sy Fabian, zokiny lahy ary i Felix no zandriny indrindra, dia nampianarina ho tena fivavahana.
Nobeazina tao amin'ny tanànan'i Memmingen Barian izy, tany amin'ny faritry ny tanan-dehibe Bayernny tambajotram-pandraketam-paritra. Tanàna iray fantatra amin'ny fizoran'ny baolina kitra ho an'ny ankizy Bayern Munich Skoty. Ny fahazoana namana izay milalao baolina kitra dia midika fa mety hiaraka amin'izy ireo ianao. Izany no nanombohan'izany rehetra izany tamin'i Mario tanora sy Fabian zokiny lahy.
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -The Bayern Loss
Afaka nivezivezy mora tokoa tamin'ireo horonan-tsarin'ny Bundesliga i Mario Gotze Bayern Munich. Nanao fitsapana ho an'ny tanora tao amin'ny toeram-piasany izy ary vonona ny hanaiky azy izy ireo talohan'ny vaovao iray momba ny famindrana ny rainy.
Rehefa vao enintaona enin-taona i Mario dia nanaiky ny asa an-tsitrapo tao amin'ny Oniversite teknisianina ao Dortmund ny rainy, izay nivadika ho profesora ao amin'ny Anjerimanontolo.
Nanaiky ny ray aman-dreny fa tsy tokony havela hody i Mario Gotze raha mbola kely loatra izy. Tsy maintsy nibata ny kitron-tsoany ny tanora Mario. Nanaraka ny ray aman-dreniny tany amin'ny Lohasahan'i Ruhr izy niala ny tranony taloha.
Amin'ity dingana ity, Bayern ny Ny fahaverezana dia tena marina ny Dortmund hahazo.
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Career Summary
Nanohy ny fialam-boly malalany i Mario tao amin'ny Lohasahan'i Ruhr 'Milalao baolina kitra'. Ny ray aman-dreniny dia nampiditra azy sy ny zokiny lahy tao amin'ny SC Ronsberg mba hanana ny kalitaon'ny baolina kitra amin'ny tanora. Bayern dia efa nomeny azy. Samy nilalao ho azy ireo i Mario sy Fabian hatramin'ny taona 1995 ka hatramin'ny 1998.
Little Mario sy Rahalahy Fabian
Little Mario no mpilalao baolina kanto indrindra teo amin'ny mpiara-milalao azy. Tsara kokoa noho ny zokiny lahy. Nahasarika mpijery izay nahita azy nampiseho fahaizana mahagaga tamin'ny mpanohitra lehibe kokoa araka ny hita etsy ambany.
Little Mario Gotze sy ny ekipany
Raha te haka zavatra hafa niainana tany an-toeran-kafa i Little Mario, dia nifindra tao amin'ny FC Eintracht Hombruch izay nilalaovany tamin'ny 1998 ho 2001 alohan'ny nifindrany tany Dortmund.
Götze dia lasa vokatra avy amin'ny akademia tao Dortmund, voalohany niditra tao amin'ny klioba ho valo taona. Nandritra ny fotoana ririnina tamin'ny vanim-potoanan'ny 2009-10 Bundesliga, ny mpanafika Dortmund Jürgen Klopp dia nandrisika an'i Götze ho an'ny ekipa voalohany.
Ao amin'ny tenin'i Klopp ..."Hatramin'ny voalohany, nahita azy aho, dia nanisa ny andro fotsiny aho mandra-pandrisiko azy ho an'ny ekipa zokiny, raha tsy manao fihetsika tsy mendrika."
Götze dia nandray ny lanjany ary mpilalao manan-danja tao amin'ny ekipa federaly tao Dortmund tamin'ny federasiona 2010-11. Fotoana niarahany niarahany tamin'i Marco Reus izy. Tamin'ny 23 April 2013, nanambara izy fa nifindra tao amin'ny 1 Jolay 2013 ho any amin'ny mpifaninana i Götze Bayern Munich taorian'ny namoahan'ny ekipan'i Götze ny famotsorana an'i Xenumx tapitrisa.
Ny endriny lehibe dia nitohy raha nandroso tamin'ny fandresena ny Fiadiana Tompon-daka 2014 FIFA ho an'i Alemaina izy. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny rehetra ao amin'ny fianakavian'i Mario dia mpandidy. Izy ireo dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny fanalavirana ny tsy fahombiazana noho ny fanatratrarana ny vokatra tsara. Izy io dia fianakaviana misy lehilahy araka ny sary etsy ambany.
Ny fianakavian'i Mario Gotze tamin'ny lehilahy
Ankehitriny, manome antsipiriany momba ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana Mario Gotze ianao, anisan'izany ny reniny.
RAY: Tamin'izany fotoana izany, Jürgen Götze dia nanao hetsika ara-pianakaviana avo lenta kokoa. Mpampianatra Alemana ny rainy, eo amin'ny sehatry ny Engineering Engineering sy ny Teknolojia momba ny teknolojia ao amin'ny Oniversiten'i Dortmund. Nahazo ny diplaomasiny tamin'ny taona 1990 izy, roa taona talohan'ny nahaterahany dia teraka i Mario Gotze.
Nanomboka tamin'ny 1987 ka hatramin'ny 1990, dia nampiasaina ho mpanampy ara-tsiansa tao amin'ny sehatry ny "Theory Theory" sy ny "Engineering Engineering" ao amin'ny Oniversite Teknikan'i Munich. Nanao fikarohana fikarohana maro izy tao amin'ny anjerimanontolo samihafa. Hatramin'ny 1997, Jurgen dia profesora (sampan-draharaha momba ny teknolojia momba ny angona) ao amin'ny Faculty of Engineering Engineering sy ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao ao amin'ny Oniversiten'i Dortmund.
Tsy nanery ny zanany hanaraka ny dian-tongony izy. Navelany hanaraka ny nofinofiny izy ireo mba ho lasa izay tiany ho izy 'Professional Footballers'.
Jürgen Götze dia mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay midika fa azo atao izy. Ny laharan-tariby dia ny (+ 49) 231 755-2091.
rENY: Astrid Götze no renin'i Mario Gotze. Vehivavy mpikarakara tokantrano sy fiarovana ny fianakaviany izy. Astrid dia tompon'andraikitra amin'ny fihazakazahana sy ny fitantanana ny tokantranon'ny fianakaviany. Tena nikarakara ny vady aman-janany izy. Azonao jerena eto ny sarin'i Astrid sy ny fianakaviany.
Ny maman'i Mario Gotze (Astrid) sy ny fianakaviana
NY GOTZE RAHARAHA
FABIAN GOTZE: Fabian zokiny zokiny ankehitriny dia mpiasa maimaim-poana toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Niala tao amin'ny rafitra tanora tao amin'ny 2010 izy. Teraka tamin'ny 3rd of June 1990 i Fabian. Fabian sy Mario araka ny sary etsy ambany dia teraka tamin'ny taona 2. I Fabian dia mijery kokoa ny sary eo ambany.
Friendly Brothers- Fabian Gotze (Ankavia) sy Mario Gotze (ankavanana)
FELIX GOTZE: Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, i Felix, tanora zandrin'i Mario Gotze, dia milalao ho an'ny ekipa ao amin'ny ekipa 19 Bayern Munich. Tonga tany izy avy any SpVgg Unterhaching. Izy no mpiaro ivon-toerana mitondra ny laharana 20. Teraka tamin'ny 11T ny andro febroary 1998. Felix (sary etsy ambany) dia 6 taona latsaky ny Mario Gotze.
Mario Gotze ary Kid Brother - Felix Gotze
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Relationship Life
Tahaka ny anehoany fahaizana amin'ny sehatra, dia manana fahaiza-manao amin'ny vehivavy ihany koa i Mario Gotze. Götze dia nifandray tamin'ny modely alemana alemà Ann-Kathrin Brömmel hatramin'ny 2012 (Roa taona talohan'ny mondialy 2014).
Ny sipany Mario Gotze- Ann-Kathrin Brömmel
Ann-Kathrin dia modely, mpihira sady mpitoraka blaogy any Alemaina. Nataony ny toeran'ny 7th ao amin'ny modely 10 ambony manaraka. Ny hirany dia mbola safidy voalohany eo amin'ireo tanora ao Alemaina. Brommel, izay nanomboka ny famolavolana tamin'ny taona 16, dia vao mainka nahatsikaritra kokoa rehefa nahazo ny laza iraisam-pirenena avy amin'ny World Cup 2014 araka ny hita etsy ambany ny sakaizany.
Ny Mario Gotze sy Girlfriend Ann-Kathrin Brömmel mankalaza ny fandresen'ny World Cup
FIVORIANA EVA GREEN:
Nahavita zavatra izay nataon'ireo mpilalao baolina vitsivitsy i Gotze rehefa nanolotra an'i Eva Green izay nilalao an'i Vesper Lynd tao amin'ny James Roy 2006 mpilalao sarimihetsika Casino Royale. Nivoaka roa taona talohan'ny nifampiraharahana izy ireo.
Ny fifandraisan'i Mario Gotze amin'i Eva Green- Untold Story
TONGA I RIHANNA: Nahazo fahafinaretana tamin'ny fandresena ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany niaraka tamin'ny namanao sy ny fianakaviany i Gotze indray mandeha alohan'ny fety niaraka tamin'i Rihanna, izay namoaka sary ho azy sy ilay mpilalao baolina kintana mahafinaritra miaraka amin'ny fotoana mahafinaritra.
Mario Gotze mankalaza ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany miaraka amin'i Rihanna
Araka an'i Rihanna "Ny fijerena ny fizarana World Cup 2014 no traikefa nahafinaritra indrindra tamin'ny fiainako manontolo."
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Fahasalamana
Tamin'ny voalohandohan'ny volana Martsa 2017, nitatitra fa nitebiteby tamin'ny fikorontanan'ny metabolika i Götze. Ny Sad i Mario ihany no afaka mipetraka eo amin'ny seza ary mijery ny ekipany.
Ny toe-pahasalamana tatỳ aoriana dia fantatra fa mifindrafindra, Ny aretin-kozatra izay mahakasika ny vatana amin'ny hozatra, izay midika fa tsy miasa tsara izy ireo. Io fahasamihafana io dia tompon'andraikitra amin'ny fampiasana herisetra sy ny fahazoana mavesatra. Izany tokoa, ny aretina tsy fahita firy ho an'i Mario Gotze tsy tanteraka.
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Ny baoritra ankavia havia nalefa mozea
Ny baoty havia Mario Götze dia efa nahatratra ny tanjon'ilay farany amin'ny World Cup 2014 dia nalefa avy hatrany tany amin'ny tranombakoka baolina kitra alemana taorian'ny fifaninanana World Cup 2014. Mario Gotze, ilay mpanasoa dia nanapa-kevitra ny handefa ny boot ankavia ho any amin'ny Museum Football Football. "Mahavariana fa maro ny mpankafy baolina kitra no liana amin'io boot manokana io." Hoy izy Joachim Löw, Germany Head Coach eo.
Ny mpitsoa-ponenana tsy mitonona anarana dia nanao ny avo indrindra amin'ny vola roa tapitrisa euros ho an'ny boot amin'ny gala momba ny fampielezam-peo amin'ny fahitalavitra. Ampiasaina amin'ny fampirantiana ao amin'ny tranombakoka alemà malaza ao Dortmund amin'izao fotoana izao.
Ny fandresen'ny World Cup an'i Mario Gotze: Nalefa tao amin'ny Museum ny kirarony havia
Ny booty havia dia nanangana mihoatra ny € 16,269,471 tao anatin'ny herintaona tao amin'ny Museum. Ireto ambany ireto i Mario mampiseho ny boots amin'ny ankizy alemà sasany taloha kelin'ny nandefasana azy tamin'ny farany tao amin'ny Tranombokin'ny Museum Glass.
Ny fandresen'ny World Cup an'i Mario Gotze: Ny kiraro ankavia nankalazan'ny mpianatra alemà
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Izy dia zazalahy kely
Fantatry ny rehetra momba ny endrik'i Gotze, ary ny lehilahy mihitsy aza dia mitebiteby mba hitazona ny endriny ivelany ary na dia ao amin'ny gazetiboky GQ aza.
Nandritra ny resadresaka nifanaovany tamin'ny GQ dia hoy izy: "Olona vitsy monja ny olona. Tiako ny mikarakara ny endriko tahaka an'i Marco Reus. Kanefa tsy mifantoka amin'ny antsipiriany rehetra aho, tsy zava-dehibe amiko izany. "
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Ny Namany Tsara Indrindra
Gotze ary Reus dia mpinamana amin'ny ankizivavy fony izy ireo samy namakivaky ny rafitry ny tanora tao Dortmund.
Reus tsy nahatratra ny fiadiana ny amboara eran-tany noho ny ratra nahazo fampiofanana, saingy nitazona ny akanjon'ny anabaviny i Gotze taorian'ny fandresena farany tamin'i Arzantina ary nanolotra ny tanjony ho an'ny anjeliny.
Mario Gotze mankalaza an'i Reus namany akaiky indrindra-fandresena eran-tany
Mario Gotze Tantara an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra -Mpankafy tao Dortmund
Ankoatra ny fandresena ny Fiadiana ny amboara eran-tany 2014 ho an'i Alemaina, dia hotsarovana mandrakizay i Mario Gotze amin'ny hatezerana Dortmundny mpankafy rehefa nilaza izy ireo fa namadika azy ireo amin'ny fidirana amin'ny mpiray tsikombakomba aminy Bayern Munich. A Dortmund Ny mpankafy dia nanala haingana an'i Mario ho an'i Judas Iscariot "Judas Gotze" ao Borussia Dortmund.
Mario Gotze- Indray mpilalao baolina kitra malaza indrindra any Dortmund.
Other Dortmund Ireo mpankafy dia nifanaraka tamin'ny anaran'i Götze tao amin'ny akanjony kopia na niampita na nakatony araka ny hita etsy ambany.
Nisy mpankafy iray naneho ny tsy fisian'ny fitiavan'i Mario Gotze
Izany fihetsika izany dia nanosika an'i Mario Gotze hiverina any Dortmund amin'ny 2016. Peharbs, voaozona izy hijanona mandrakizay. Afaka nandao ny klioba tsy nifaninana koa izy tamin'ny ho avy.
Miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra tsy dia tsara loatra ao amin'ny tantara nosoratan'i Mario Gotze momba ny tantaram-pitiavana sy ny bio, Mifandraisa aminay!